‘कुरा होइन काम गर्ने नेतृत्व आबश्यक छ’ – Businesssansar
‘कुरा होइन काम गर्ने नेतृत्व आबश्यक छ’
लामो समयदेखि नेपालको उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय रहेर काम गर्दै आउनुभएका उद्यमी दिनेश श्रेष्ठ यतिवला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अधिवेशनमा बस्तुगत उपाध्यक्ष पदमा उमेद्वारी दिनुभएको छ । हाल महासंघकै उद्योग समितिको सभापति समेत रहनुभएका उहाँ नेपाली कागज लगायतको उद्योगमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपाली उद्योग र नेपाली उत्पादनका क्षेत्रमा निकै सक्रिय एवं परिचित दिनेश क्षेष्ठ महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागी बस्तुगत संघवाट उपाध्यक्षका प्रत्यासी समेत हुनुहुन्छ । उहाँ सगँ गरिएको बार्तालाप यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
वस्तुगत संघवाट उपाध्यक्षमा तपाईको उमेद्वारी किन ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा यतिका बर्ष काम गरेकोे अनुभवबाट सिक्दै समग्र उद्योगी व्यवसायीहरुका हक हितका निम्ति थप कामहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । अर्को कुरा संघको संरचनागत नीतिकै कुरा गर्दा पनि मेरा उमेद्वारी नियम संगत छ ।
प्रदिपजंग पाण्डे प्यानलवाट उमेद्वारी दिनुभएको छ । तपाईहरुका मुख्य आर्थिक एजेन्डा के के हुन् ?
सम्पुर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गरी दिगोविकास सहितको आर्थिक जागरण गर्ने र त्यसमा राज्यबाट पाउनु पर्ने सहयोगका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने । आर्थिक विकासका एजेण्डालाई सरकार समक्ष सार्थक ढंगवाट प्रस्तुत गर्ने । अर्को कुरा हामी हाम्रो व्यक्तिगत लाभ भन्दा समग्र उद्योगी व्यवसायीको भलाइका निम्ति सर्मपित हुने छौ । हामीमा समस्यालाई समस्याका आखाँले हैन, समाधानका उपायले हेर्ने क्षमता छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभित्र उद्योग व्यवसाय विस्तारका निम्ति खेल्नुपर्ने भुमिका के–के हुन् ?
लगानी गर्नका निम्ति स्पष्ट नीति–नियमको खाँचो छ तर हामीसँग त्यस्ता केही बाझिँने ऐनहरु छन् तिनलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हामी यो विषयलाई सम्वधित निकाय समक्ष पुर्याउछौ र निश्चय नै हल गर्न सफल बन्छौ । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आर्थिक मुद्धालाई सम्वोधन नगरेसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । तसर्थ महासंघको अबको नेतृत्वले यस सम्बन्धमा पहलकदमी चाल्ने छ । अर्को कुरा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उद्योग नीतिलाई पनि अगाडि ल्याएर लगानीकर्ता सामु सकारात्मक सन्देश पुर्याउनु पर्छ, यसका निम्ति हामी प्रतिवद्ध छौ । उद्योगमा लगानी बृद्धि भएपश्चात स्वतह रोजगारी श्रृजना हुनेछ जसवाट दिनहुँ बाहिरिदै गरेको युवा श्रम शक्तिलाई रोक्न सकिन्छ र आम नेपालीले चाहेको समृद्ध देश नेपाल बनाउन सक्छौ । यसका निम्ति नेतृत्व सदा–सर्वदा कटिबद्ध छ ।
एक जिल्ला–एक उत्पादनमा आज सम्म उद्योग वाणिज्य महासंघको भुमिका शुन्य झै देखिनुको मुख्य कारण के हो ?
आज सम्म कुरा मात्र भए, काम भएन । यो बर्षवाट महासंघले यसका निम्ति छुट्टै इकाई स्थापना गरी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघसँगको समन्वयमा कुन जिल्लामा कुन उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको बिस्तृत अध्ययनका साथ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने छ ।
यो महाधिवेशनबाट उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ गति लिन सक्छ भन्ने कुरा आशा गर्ने कि नगर्ने ?
अग्रजहरुको अनुभवलाई ग्रहण गर्दै युवा शक्ति लाई साथमा लिएर अघि बढ्ने हाम्रो जुन एजेण्डा छ यसवाट पक्कै पनि महासंघले मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रले नै काचुँली फेर्ने छ । हामीमा समस्यालाई समस्याका आखाँले हैन, समधानका उपायले हेर्ने क्षमता छ ।
महासंघको महाधिवेशनका बारे अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
मिठो कुरा गर्ने भन्दा काम गर्नेलाई विश्वास गर्नुहोस । सक्षम, इमान्दार व्यक्तिहरुलाई साथ दिनुहोस् जसवाट भोलि महासंघ मात्र नभई समग्र देश नै प्रगतिपथमा अघि बढ्न सकोस् । साथ–साथै नयाँ नेतृत्व सम्पुर्ण सदस्यहरुको समस्यालाई समाधान गर्न प्रतिवद्ध छ । धन्यवाद ।
Previous Post: सडक र करेसाबारी कार्यक्रमलाई दुई अर्ब ४५ करोड अनुदान
Next Post: ‘म पैसाका लागी सेक्समा विक्ने युवती होइन्’:विना थापा